बिहान वा साँझ? कुन समयमा एक्सरसाइज गर्दा छिट्टै घट्छ तौल? जानिराखौ! - Bigul News
बिहान वा साँझ? कुन समयमा एक्सरसाइज गर्दा छिट्टै घट्छ तौल? जानिराखौ!
एक्सरसाइज गर्ने समयलाई लिएर धेरै जसो मानिसहरु दुविधामा रहन्छन्। हरेकको आफ्नो एक मनपर्ने एक समय हुन्छ। केहि मान्छेहरु बिहान उठ्न सक्दैनन् र केहि मान्छेहरु बिहान उठेपनि एक्टिभ महसुस गर्दैनन्। थुप्रै मान्छे साँझको समयमा एक्सरसाइज गर्छन र हिड्छन्। केहि मान्छे बिहान उठेर एक्सरसाइज गर्छन्। निकै कम मान्छेलाई थाहा छ कि एक्सरसाइजको समयले पनि वजनमा असर पर्छ।
बिहानको समयमा एक्सरसाइज: यस समयमा एक्सरसाइज गर्नुको धेरै फाईदा रहेको छ। बिहान छिट्टै उठ्यो भने तपाईको दिनभरिको लागि राम्रो समय मिल्छ। बिहान एक्सरसाइज गर्नाले शरीरमा एंडोर्फिन हार्मोन बन्छ। जसले तनाव कम गरेर दिमागलाई शान्त गर्छ। त्यसैले पुरै दिन राम्रोसँग गुज्रिन्छ। मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजमा छापिएको एक स्टडीको अनुसार जुन महिला बिहान उठेर ४५ मिनेटसम्म ब्रिस्क वाक गर्छ उनको ध्यान खानपिन प्रति कम जान्छ । यति मात्र नभई यी महिला पुरै दिन एक्टिभ रहन्छन्।
बिहान एक्सरसाइज गर्नाले मेटाबोलिज्म पनि ठिक रहन्छ। स्टडीमा भनिएको छ कि साँझ एक्सरसाइज गर्नेभन्दा बिहान एक्सरसाइज गर्दा निन्द्रा लाग्छ।
साँझको समयमा एक्सरसाइज: हेल्थलाइनको रिपोर्टमा बताईएको छ कि दिउँसो २ बजेदेखि ६ बजेसम्म शरीरको तापमान सबैभन्दा धेरै हुन्छ। शरीरमा बढेको तापमानले मांसपेशिलाई ताकत दिन्छ। यसको मतलब यो हो कि यस समय तपाईको शरीर एक्सरसाईज गर्नको लागि धेरै तयार रहन्छन्। दिउँसो र साँझ हृदय गति र ब्लड प्रेशर सबैभन्दा कम स्तरमा हुन्छ। यसले स्वास्थ्यलाई नोक्सान कम पुग्नुको साथ-साथै एक्सरसाइज गरेको फाईदा हुन्छ। सुत्नुभन्दा अगाडी एक्सरसाइज नगर्नुहोला, किनकी निन्द्रामा समस्या हुन सक्छ। यधपी समयभन्दा बढी जरुरि के छ भने तपाई एक रुटिन बनाएर हरेक दिन एक्सरसाइज गर्नुहोस् । वजन घटाउनको लागि पनि नियमित रूपमा एक्सरसाइज गर्न जरुरी रहेको छ। यसले तपाईलाई फिट बनाइराख्छ र तनाव पनि कम हुन्छ। साथै शरीरलाई थुप्रै किसिमको फाइदा पुर्याउछ।
प्रकाशित : आइतबार, असोज ११, २०७७०८:५४
१ महिना अगाडि SLPA